डिसेम्बर ३१ मा भ्रमण बर्ष २०२० को सुरुवात टुडिखेलबाट हुन्छ - रोहिणी खनाल - ParyatanBazar.com
डिसेम्बर ३१ मा भ्रमण बर्ष २०२० को सुरुवात टुडिखेलबाट हुन्छ – रोहिणी खनाल
मंसिर २ ,काठमाडौँ। नेपाल भ्रमण बर्ष २०२०ले नेपाललाई छोइसकेको छ। नेपाल आफैमा सुन्दर छ , सुन्दर नेपाललाई अझै सुन्दर बनाउन र नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन सबै क्षेत्रहरु जोडतोडले लागि परिरहेका छन्।प्रस्तुत छ भ्रमण बर्ष २०२० सचिवालयका कार्यक्रम प्रवन्धक तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका ब्यबस्थापक रोहिणी खनालसंग भ्रमण बर्ष कै सन्दर्भमा पर्यटनबजार डट कमले गरेको कुराकानी :
भ्रमण बर्ष २०२० को तयारी कस्तो हुदैछ ?
भ्रमण बर्ष २०२० को तयारी धेरै अघि बढी सकेको छ। डिसेम्बर ३१ मा भ्रमण बर्ष २०२० को सुरुवात हामी काठमाडौँमा गर्दैछौं। त्यस्को साथै नेपालका सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकार सहितको भ्रमण बर्ष कार्यक्रम पनि हुँदैछ । त्यस्तै नेपालका दुतावास भएका २८ ओटा भन्दा बढी देशमा सन्देश सहित जनवरी ७ मा भ्रमण बर्षको स्वागत कार्यक्रम गर्दैछौं। पर्यटकहरुलाई दुतावासको कार्यक्रम मार्फत नेपाल आउनुस , घुम्नुस, संस्कृतीमा रमाउनुस र लाइफ टाइमको एक्सपिरियन्स लिनुस भनेर सन्देश दिन्छौं।
नेपालको कुन कुन क्षेत्रलाई भ्रमण बर्ष २०२० ले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ?
प्राथमिकताको कुरा गर्दा खेरि सामान्यतया काठमाडौँ , पोखरा , सौराहा ,लुम्बिनीजस्ता क्षेत्रहरु छन्। ति स्थानमा पनि धेरै कुराको सुधार गर्नुपर्ने छ , जस्तै की , साइनबोर्डको कुरा आउला , हस्पिटालिटीको कुरा आउला , तालिमको कुरा आउला , त्यसैले जुन स्थान स्थापित भइसकेको छ त्यसलाई पनि विकास गर्दै लैजाने हामीले सोचेका छौं। यति सिमित ठाउँले मात्र नेपाललाइ पर्यटकीय स्थल मानेर हुँदैन , त्यसैले हामीले नेपालको पुर्व देखि लिएर पश्चिम सम्मकै स्थानलाई समेट्नु पर्ने हुन्छ। छायाँमा परेका गन्तब्यहरुको प्रचार प्रसार गर्ने काम भइ रहेको छ। अहिले पर्यटकीय गन्तब्यको उजागरकै लागी भनेर “द नेक्स्ट डेस्टिनेसन” भन्ने कार्यक्रम पनि प्रसारण हुन् गइरहेको छ। जुन कार्यक्रमले नेपालका २६ ओटा स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यहाँको खाना , संस्कृती ,भेषभुषा , जातजाती सम्पूर्ण चिजलाई उजागर गर्ने काम गर्ने छ।
राजधानी मै पर्यटकले शौचालय जान रेस्टुरेन्ट र बैंक छिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ , यो समस्या लाई उठाउनु भएको छैन ?
हामीले शौचालयको समस्याको बिषयलाई उठाई रहेका छौं। नेपाल भ्रमणमा आउनुहुने अतिथिहरुले पनि नेपालमा सबैथोक राम्रो भएको तर शौचालय नहुँदा ट्राभल गर्न गाह्रो हुने, त्यसमा पनि महिलाहरुलाई अझै गाह्रो हुने बताउने गर्नु भएको छ। नेपाल भ्रमण बर्षले चाहीं शौचालय बनाउने भन्दा पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गर्ने काम गरिरहेको छ। यस बारे हामीले स्थानीय सरकार , प्रदेश सरकार सबै संग समन्वय गरिरहेका छौं , शौचालय बनाउन समय लाग्छ भने सहज तरिकाले उपलब्ध हुने रेडिमेड ट्वाइलेट ल्याउन सकिन्छ की भनेर पनि सल्लाह गरिरहेका छौं। पर्यटक बढी आवतजावत गर्ने स्थानमा शौचालयको व्यवस्था गर्ने र भइरहेको शौचालयलाई सफा राख्न समेत महानगरसंग हामीले पहल गरिरहेका छौं।
भ्रमण बर्ष २०२० आउन अब मात्र एक महिना आधा बाकि छ, तपाईहरुलाई भ्रमण बर्षको लागि केहि तयारि नै भएको छैन , कतै हामीले भ्रमण बर्ष घोषणा गर्न हतार त गरेनौ भन्ने लागिरहेको त छैन ?
अलिकति पनि हामी चाडो भयौ भन्ने लागेको छैन। भ्रमण बर्ष अहिले भर्खरै २०१९ मा घोषणा गरेको पनि हैनौ यो धेरै पहिलादेखिको तयारि हो , मात्र भ्रमण बर्षको प्रचारप्रसार चाहीं २०१९ बाट सुरु गरिएको हो। अझै हामीलाई २०२० लाइ मात्र हैन त्यहाँ भन्दा पछिल्ला बर्षलाई पनि पर्यटक चाहिन्छ । त्यसैले भ्रमण बर्षलाई मात्र नभएर त्यहाँभन्दा पछिल्ला बर्षलाई पनि टार्गेट गरेर काम गरिरहेकै छौ। २०२० मा नेपालमा धेरै बोल्ड डेस्टिनेसनहरु छन् जसले विश्वका पर्यटकलाई लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स भनेर प्रचारप्रसार गर्ने हो। त्यसैले बिगतका हाम्रो भ्रमण बर्षको बिबरण हेर्दा पनि हामीलाई लाग्छ कि चाडो भएको छैन, यो भ्रमण बर्षले २०२० र भन्दा पछाडिका हरेक बर्षमा अहिलेको तुलनामा धेरै पर्यटक नेपाल भित्र्याउनु हो र हामि सबै तयार पनि छौ भ्रमण बर्ष २०२०को लागि।
भ्रमण बर्षको नदेखिएको पाटो (बिहाइण्ड दि सिन) बयान गर्दा ?
भ्रमण बर्ष सबैका लागि एउटा क्याम्पियन मात्र थियो तर हाम्रो लागि क्याम्पियन मात्र नभई राष्ट्र र जनताको गौरब पनि हो। सरकारले भ्रमण बर्ष घोषणा गरेसंगै विभिन्न मिडिया, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ कि भ्रमण बर्षको तयारि कत्ति पनि छैन तर यसमा नदेखिएको पाटो थुप्रै छन्, गाउपालिका,स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सरकार सबैलाइ भ्रमणबर्ष कै चटारो छ अझ आम नागरिक पनि भ्रमण बर्षकै लागि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट लागि परिराख्नु भएको छ। भ्रमण बर्ष भन्ने बित्तिकै सब्बै काम पर्फेक्ट र एक्कै पटक देखिदैनन ! धेरै दुख हुन्छ कुनै पनि कुराको तयारि गर्न , आइसक्यो अब धेरै दिन ,महिना छैन यो बाकि छ भन्यो दौड्यो, यसरि हैन एस्तो गर्दा चै राम्रो हुन्छ भन्यो, देशको सवाल छ काम राम्रो हुनपर्छ भन्यो। धेरै काम भैरहेकै छन् आवश्यक जनशक्ति देखि भौतिक संरचना समेत बनाउन पर्दा सहज छैन , सबै कुराको कानुनी मापदण्ड अनुरुप चल्न पर्ने र बजेट ढिला पास भएको कारणले पनि काममा अलिकति ढिलासुस्ती चाहिं भएकै हो तर हामीले भन्न चाँही नसकेको मात्र हो त्यसैले सबैलाई जानकारी गराउन अहिले हामि आफ्नै मिडिया पनि स्थापना गरेका छौ visitnepal.gov.np. यसमा सबै कामहरु स्पष्ट रुपमा खुलाएका छौ। पहिलेको तुलनामा अहिले कामको रफ्तार पनि बढिरहेकै छ। हामि भ्रमण बर्षको पुर्व सन्ध्यासम्म लगभग सबै तयारि सक्ने छौं।